Izwe & Ukufihla Ugu - I-Airbnb
Izwe & Ukufihla Ugu
428 okushiwo abanye
Korora, New South Wales, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Adele
U-Adele Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle lesitudiyo sombhede ongu-1 elibekwe endaweni ethule, ethule engamahektha angu-2.5 ezungezwe imvelo. Imizuzu emi-5 kuphela eNyakatho yesikhungo saseCoffs Harbour, eduze namabhishi, izitolo nezindawo eziheha izivakashi, kepha ungaba kude!
Ine-air conditioning, ifeni yophahla, ikhishi, i-ensuite, umpheme omkhulu, konke okunokubukwa okuhle kwe-panoramic yesigodi saseKorora. Inqwaba yezindawo zokupaka izikebhe noma amaveni kanye neminithi elingu-1 kuphela ukusuka kuthelawayeka.
Indawo enhle yokuphumula yokuzilibazisa uwedwa, abahambi bebhizinisi noma izindawo zokuphumula zothando.
Wonke amalineni namathawula anikeziwe, kanye nezindawo zokwenza itiye nekhofi. Isiqandisi sebha, iketela, itoaster, imicrowave, (asikho isitofu). Izinto zokugeza eziyisisekelo zifakiwe.
4.90 · 428 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-428
Jabulela amabhishi amahle ogwini lwe-Coffs, uhambo olusogwini, ukubuka imikhomo & amashatha okudoba, amahlathi emvula nezimpophoma, izindawo zokudlela, amathrekhi ebhayisikili angu-4wd nezintaba, kanye nezinye izindawo ezinhle zokuzijabulisa zezingane nezokuzijabulisa kanye nezemidlalo.
Asikushayeli ucingo kuphela uma kukhona odinga usizo ngakho, kodwa sizokushiya kuwena ukuze ujabulele isikhathi sakho nathi.
UAdele Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-6654-1
Hlola ezinye izinketho ezise- Korora namaphethelo